यस्तो ब्यबहार जायज भएन सरकार, ध्यान दिन जरुरी Nepalpatra यस्तो ब्यबहार जायज भएन सरकार, ध्यान दिन जरुरी
यस्तो ब्यबहार जायज भएन सरकार, ध्यान दिन जरुरी
११ चैत्र २०७६, मंगलबार
यस्तो ब्यबहार जायज भएन सरकार, ध्यान दिन जरुरी ! यो समय भनेको नागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने र कुन चिजको कमी छ भनेर पुर्याउने समय हो । रोग लाग्न नदिनु राम्रो हो तर रोग लागेकालाई घरमा बस भन्नु के जायज हो र ?
डाक्टरले कुनै प्रवाह नगरी चेकजाँच गर्दै औषधि दिइरहेका छन् । रोग मेरो विचारमा ठूलो होइन तर रोग लागेकालाई बचाउन प्रयत्न गर्नु र सर्नबाट रोक्नु ठूलो कुरा हो । वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा रोग दवाउनु पनि ठूलो समस्या हो । उपचार गराउन पाउनुपर्छ ।
खोकी लागेको छ, दम बढेको छ यस्ता लक्षण देखिदैमा नोबेल कोरोना भाइरस हुनसक्छ भन्दै उपचार नगर्नु वा नगराउनु भनेको ठूलो मुर्खता हो, उ त्यसै मर्न सक्छ । आज हामीले आफ्नो स्वार्थमा नोबेल कोरोना भाइरस नै नलागेको व्यक्तिलाई मर्न बाध्य बनाउदैछौं के यो जायज हो र ?
बृद्ध हुनु समस्या होइन बृद्ध भएर उपचार नै नपाई मर्नु बाध्यता भएन र ? बर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा चक्काजामले रोग रोक्ने होइन बरू गाउँबाट रोगको सक्रमण फैलन सक्ने देखिन्छ । उदाहरण यदि गाउँमा कुनै एक जनालाई नोबेल कोरोना भाइरस लागेको छ, यसको उपचार भएन भने उसले गाउँका अन्यलाई रोग सार्न सक्छ ।
जस्तै सानो तान्द्रोमा लागेको आगो फैलिदै भिषण ठूलो हुदै देशलाई नै समाप्त पार्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन हामीले प्राथमिक उपचार गराउदै जानु आवश्यक छ । नगरपालिकाभित्र कति जना श्वासप्रश्वासका रोगी छन् कति बृद्धबृद्धा छन् सबैको रेकर्ड राख्दै उनीहरूलाई सरकारको निगरानीमा उपचार गराउन आवश्यक छ । यस्तो ब्यबहार जायज भएन सरकार, थप ध्यान दिन जरुरी छ ।
मानिसलाई रोग लाग्नुका प्रमुख कारणहरू
कोरोना भाइरसको उपचारमा उपयोगी हुने नेपाली औषधिहरु
कोरोना भाइरसका राम्रा पक्ष र मानव स्वास्थ्यमा यसको असर
धर्म र संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्न किन आवश्यक छ ?
विद्यालय नै अभिभावक
नेपालको विकासमा कसैको ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्य
किन धर्मको आचरण र कर्तव्य पालन गरिनुपर्दछ ?
गाजाको प्रयोग र मानव स्वास्थ्य
चार तरिकाबाट बन्न सक्छ नयाँ सरकार, त्यो कुन-कुन हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले जे चाहे, त्यही भयो !
१ लाख ऋणबाट शुरु गरेका शङ्कर भण्डारी ११ होटलको मालिक
शिक्षा, समृद्धि, नेपाल र नेपाल शिक्षक सङ्घ
आज संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको खुलासा
भूमाफिया भन्दै स्थानीयले मञ्चमै ढुंगामुढा गरेपछि भागे विष्णु पौडेल र लेखराज भट्ट
प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक सुरु हुनुअघि नै बैठक छाडेर हिँडेपछि...